ဖူးနုသစ်: နေ့ခင်းဖက် မြည်တတ်သော ဖုန်းသံများ (၁)
Posted by ZT at 1:42 PM
အယ် ဂလိုတွေလား။ မလွယ်ပါ့လားနော်။ လည်လိုက်တာမွှတ်လို့။ ဟိုဖက်ကလူတော့ ထက်မြက်လိုလူနဲ့တွေ့မှ ရပ်သွားတော့မယ်။
its good idea n most of people facing this problem. We should respone by this way.
အဲဒီလိုမျိုး idea လေး သဘောကျတယ်
မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ပြန်ပညာပေးတာပေ့ာ ...
ဖတ်၊ မှတ်၊ ပြန်
လယ်မှဖြစ်မယ် လယ်မှဖြစ်မယ် ဂျင်လိုမွတ်နေအောင် လည်မှဖြစ်မယ် :D
အဲဒီလို လုပ်လိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ။ တို့လဲ ခံရဖူးတယ်။ ၁၉၉၉ တုန်းက ထင်တယ်။ Orchard Road မှာ shopping ထွက်တုန်း survey လုပ်တာ ဖြေပေးပါလို့ ကျောင်းသားလေးတွေ အကူအညီတောင်းလို့ အားနာပြီး ဖြေမိတယ်။
ကိုယ့်မှာ credit card ရှိသလား မေးလို့ ရှိတယ် ပြောမိတာ လေယာဉ်လက်မှတ် မဲပေါက်တယ် ဆိုပြီး Resort ကို လပေးနဲ့ ရောင်းတယ်လေ။ မလိုချင်ပါဘူးဆိုလဲ ပြောမရ။ နောက်ဆုံး အမျိုးသားက အချိန်တွေ ကုန်လို့ စိတ်ဆိုးပြီး ကိုယ့်ကို အားနာတာ ခံချင်အုံး တဲ့။ ကိုယ့်အချိန်တွေ ပေးလိုက်ရတာ နှမြောလိုက်တာ။ ကုမ္ပဏီ ဖွင်ပြီး အုပ်စုလိုက် လိမ်နေကြတာကိုး။
အခုလို ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ခံဖူးသူမို့ အတော်အရသာ ရှိသွားတယ် ZT ရေ..
ဒီမှာ ဒီလိုပဲ..ဒီလိုနည်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေကို လိမ်ပြီး
သေသေချာချာမှတ်သားသွားသည်။ ခုတလောတော့ အာမခံကုပ္မဏီတွေက လိုက်လံဆက်သွယ်နေကြသည်။ ဟိဟိ။
လေ့လာ မှတ်သား ဖတ်ကြားကြောင်း